Isikhathi akakaze aphazamisekile. Esikhathini umongo izinhlelo it has a ekuqaleni nasekupheleni okuqukethwe. Uma umsebenzi uqala, uhlelo iyasebenza, kuhlanganise imibhalo, wavula indawo ... Okokuqala izinhlelo isibe "idatha", okungukuthi "lutho", kodwa ngemva kweminyaka eminingi kusukela ekuqaleni ngasibuyisela siqashelwe ngokomthetho.
Computing kwaqala nge timer (noma processor egijima timer): akukho amasignali isikhathi esicacile noma yedijithali noma analog, noma yemvelo - umane akekho. Isikhathi njalo futhi yonke indawo samanje, kodwa linikezwa kanjani futhi kunakwe incike izinga lalolu hlelo, nokuthi kubaluleke kakhulu ngezinye izikhathi, isikhathi esingakanani ukuthi kuyoba khona.
nefilosofi sikhathi, okuyinto inenani abalulekile
Ngo izinkathi ezahlukene izilimu babe nombono ezahlukene isikhathi factor futhi waba ethize ifomethi yesikhathi sosuku. Kodwa uma singadli izinhlelo real-time of esidlule, nokuqonda injongo efanele (mass, ikakhulukazi) ifikile muva nje.
Ekuqaleni, lena engokoqobo wavuma kubonakala izinhlelo. Onjiniyela bafuna ngayo ukufeza umsebenzi omkhulu, kodwa ngaso sonke isikhathi, uziqaphele singakanani isikhathi kunendaba.
будет иметь катастрофическое значение. Ngokumangalisayo, ngisho umcabango, kwakungekho muntu, onjiniyela abaningi kanye nabasebenzisi software ungazange ngisho ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, ukuthi inkinga yama-inombolo kwamadijithi ngefomethi usuku ukuqokwa ngonyaka kuyodingeka value inhlekelele.
Kuphela uma 2000 wasondela, konke kusenjalo ucabange ngalokho kwenkululeko esisemthethweni abasondelene, hhayi nje ukuthi uhlelo yasungulwa uqobo ngokuhlakulela algorithm yayo.
Lapho izinkanuko asemalutshwana inombolo kwamadijithi konyaka, entsha umqondo: kwasendaweni. Kwavela ukuthi usuku kuncike kakhulu ku-indawo kwesicelo, futhi nomqondo ifomethi yesikhathi sosuku, ekugcineni ngathutha kusukela imibono elula ku isigaba ulwazi olwakhiwe.
Isikhala imisebenzi izibalo
impumelelo Undoubted ka Fortran ulimi, okusenzeka kuthiwa wenziwa nokuchema yasekuqaleni maqondana izibalo ezinkulu, owavusa umphumela eyodwa kuphela. Ikhompyutha kwakungelona fast ngokwanele babeka Curves on the esishwibweni, kubalwa nomehluko futhi integrals. Akuwona wonke umuntu yokuqonda okushiwo ezijulile wezibalo ephakeme, kodwa isikhathi ukuthi kukhompyutha okuchitha yokusingatha ifomula, uqaphela konke.
Icubungula idatha isikhathi esiningi noma olude iba abalulekile isikhathi isici: iphutha kungenzeka kahle elingana nenani mkhathi, zafinyelela kude endaweni okungeyiyo, kuphela ngoba kwakungafaneleki ukuba abathintekayo noma ukuthi injini ngesikhathi esifanele.
Mhlawumbe Inthanethi kuye kwaholela ngesikhathi isithakazelo esikhulayo njengendlela eqhubekayo futhi okuphawulekayo lena akubalulekile kangako. Zonke izilimi izinhlelo yanamuhla njengoba isici yesikhashana bento noma isakhiwo, ifakwe isakhiwo efanele futhi engasho lutho lalo.
Java ifomethi yesikhathi sosuku (umqondo Sun)
Isimo ezahlukene usuku Java. Ifomethi yosuku uvezwa lapha akusilo elilodwa ikilasi abstract. Nokho, ngokuchichima izindlela zayo ufanelwe isihloko ehlukile. Ukufometha Ngokwenguqulo into ehlukile, okuyinto ivumela imisebenzi acabangele ifomethi nezici zakhona usuku, ie usuku udaba ulimi idingeka.
A umthuthukisi angasebenzisa amakilasi: DateFormatSymbols, Ikhalenda, GregorianCalendar, IndawoYesikhathi, MaskFormatter nabanye. Presentation ifomethi yesikhathi sosuku lisabalele okuningi kuka kwezinye izilimi. Ikilasi ngalinye has injongo yawo.
Akunandaba format kwembulunga yonke usuku kabani ngobunjalo babo. ubuchwepheshe lwezezimali kanye eliphezulu Sun kokuqagela isimo sengqondo sina nomqondo isikhathi, noma umqondo ulwazi global futhi enamandla Oracle egciniwe. Kodwa ulimi Java buphendukile baba elula umqondo ifomethi yesikhathi sosuku ezihlukahlukene izinto futhi wonke omhlaba ekwenzeni lokho okuhleliwe.
Excellent, kulula futhi ezingabizi ukuqaliswa usuku ngokungangabazeki datapicker. Ukusebenzisa jQuery indlela, kulula ngendlela emangalisayo ukuyisebenzisa, ikuvumela ukufaka ngokushesha kunoma iliphi ikhasi ukukhetha isikhathi esiqondile noma isikhathi bese ukwethula umphumela string format date.
'#dateField' ).datepicker() календарик, у которого можно изменить не только внешний вид соответственно тематике страницы, но и локализовать под нужный язык. Wokufaka ithegi, ethola ukuqondisa okufakwayo, izibonisi yi $ indlela ( '#dateField') .datepicker ( ) amakhalenda, okungase uguquko hhayi nje ukubukeka isihloko sekhasi, ngokulandelana, kodwa futhi ukuthola ngolimi oluthandwa umuntu. Ungakwazi ukufaka hhayi kuphela usuku kodwa isikhathi emalanga eliviki.
Ekuqaleni datapicker uvele emkhakheni input, kodwa ingasetshenziswa enye ingxenye - div noma span, isibonelo. Umphumela abakwazi kuphela afakwe Inkambu yokufaka njengoba ilandelana ihlelwe (kungenzeka ukushintsha kalula okuqukethwe imigomo), kodwa futhi lisetshenziswa njengedivaysi kwenombolo.
Datapicker - ke akuyona neze ukusebenza ifomethi yesikhathi sosuku kusukela Oracle / Java, kodwa kungenzeka lokhu iwijethi ukwanelisa okuthandwa elicwengiweyo kunazo. Unjiniyela ayidingi ukubhala umbiko wakhe usuku ngokuzithoba algorithm ukusebenza naye - efika nje kuphela amakhalenda Ukugunda, kodwa futhi inkhulumomphendvulwano (iqoqo izici traffic by izinsuku, amasonto, izinyanga. Ungalungisa usuku isiqalo kanye ekupheleni usuku.
Ngisho noma isayithi kudinga version ayo ngesikhathi isethulo lapho besanda kuqala yentuthuko kunengqondo ukusebenzisa datepicker.